ओली सरकारको व्यवस्थापन देखेर चीनबाट उद्धारित नेपाली छक्कै, के भन्छन् विद्यार्थीहरु ? - Sidha News
ओली सरकारको व्यवस्थापन देखेर चीनबाट उद्धारित नेपाली छक्कै, के भन्छन् विद्यार्थीहरु ?
काठमाडौ। चीनको हुबेइ प्रान्तका विभिन्न ६ सहरबाट उद्धार भएर नेपाल आइपुगेका १७५ नेपालीले ओली सरकारको व्यवस्थापन देखेर आफूहरु छक्कै परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आइतबार बिहानपख काठमाडौंमा उत्रिएका उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रहरीको स्कर्टिङमा भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा व्यवस्था गरिएको क्‍वारेन्टाइन क्षेत्रमा लगिएको थियो ।
अबेर राति वुहानबाट उडेका उनीहरु लगभग जाग्रामकै अवस्थामा काठमाडौं उत्रिएका थिए। ‘खरिपाटी आएपछि प्राय: हामी सबै सुत्यौं। हामीलाई यहाँ बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र खानेपिउने समय तालिका दिइएको छ,’ डा. जीतसिंह भण्डारीले भने, ‘खानेकुराहरु बाहिर चउरमा बनाएको टेन्टमा लन्‍चबक्स बनाएर राखिँदो रहेछ। यहाँको व्यवस्था हामीले सोचेभन्दा पनि राम्रो छ।’
यस्तै वुहानबाट फर्किएका अर्का चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी डा. सुदीप राउतका अनुसार सरकारले वुहानदेखि नै राम्रो व्यवस्था गरेको थियो। ‘हामीलाई विमानस्थलसम्म पनि निकै राम्रोसँग लगियो। त्यसपछि विमानको यात्रा पनि निकै सुविधाजनक थियो,’ उनले भने, ‘विमानमा दिइएको खानाले नै हामीलाई निकै खुसी लागेको थियो। किनभने त्यो पूर्णरुपमा स्वास्थ्यको ख्यालगरेर, राम्रो हिसाबकिताब भएको लन्चबक्स थियो।’
स्वदेश फर्कन पाउँदा अहिले सबै नेपालीहरु निकै हर्षित छन्। त्यसमाथि पनि सरकारले गरेको व्यवस्थाले उनीहरुको मन रमाएको छ। ‘हामीले गर्न नसक्ने त होइन रैछौं नि त,’ डा. सबिर श्रेष्ठले भने, ‘अलि अगाडि नै यो सबै भइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि देश फर्कन पाइयो। यति राम्रो व्यवस्था गरेर राखेको छ। भित्रैबाट खुसी लागेको छ।’
उनको अनुसार केही दिनयता हुबेइको लकडाउनलाई झनै सशक्तरुपमा लागू गर्न थालिएकोले सबैजना त्रसित थिए। ‘पछिल्लो समय कोठाबाट बाहिर पनि निस्कन नदिने नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘अब त सामान पनि अनलाइन नै अर्डर गर्नुपर्ने नियम लागू हुनसक्‍नेसुनिएको थियो। जे भए पनि आफ्‍नोदेश आइपुगियो, त्यसैमा खुसी छौं।